Ukufota kunye neekhamera zeefoto | Iindaba zeGajethi
Akukho ndlela inokuthi iwebhusayithi inikezelwe kwihlabathi lokufota ayinakho indawo ebekelwe iifoto. Ngesi sizathu, kolu didi siza kukubonisa amakhulu eefoto ezahlukeneyo, zazo zonke iintlobo, zawo nawuphi na umbhali kunye nawo nawuphi na umxholo. Ukuba ufuna ukonwabela inani elikhulu leefoto, zenze ukhululeke, vula amehlo akho ngokubanzi kwaye ulungiselele ukonwabela.
Las Iikhamera ezihambelanayo kunye ne-reflex (DSLR) Baye baguqula umhlaba wokufota, besenza ukuba sonke sibe ngabafoti abafanelekileyo, sikwazi ukufumana izifinyezo ezifanele ubuchwephesha ukuba sizazi iiparameter ezahlukeneyo ezinikezelwa ziikhamera ezipheleleyo kwintengiso. Ukuba sikhetha i-SLR, esinayo siya kuba nayo iinjongo zazo zonke iintlobo yenzelwe iimeko ezahlukeneyo. Ukuba ufuna ukwazi ezona khamera zibalaseleyo kwintengiso okanye ukwazi ukuba yeyiphi eyona ilungele iimfuno zakho, iActualidad Gadget iya kukunceda wenze ukhetho olufanelekileyo.
Ii-apps zokufota ezilungileyo zeveki
por Iindaba zeGajethi yenzayo Iinyanga ze3 .
Iifoto zibe yeyona ndlela ilungileyo yohambo lokungafi, ukutya kosapho, imihla yokuzalwa, amatheko, ukulawula ukugcina ngonaphakade ...
por UPaco L Gutierrez yenzayo 1 ngonyaka .
Ukuhlelwa kweefoto yinto enokufikelelwa nguye nabani na oneselfowuni okanye ikhompyuter kwaye oku thina ...
Sonke sinesalamane esidala, nokuba ngootatomkhulu noomakhulu okanye oomalume ikakhulu, abaza kudibana nomhla ...
Ii-Smartphones ziliphumelele idabi ngokudilika komhlaba kwiikhamera zemveli, kodwa hayi ngenxa yomgangatho wazo, umgangatho ...
I-Leica C-Lux, ukusondeza okutsha okucokisekileyo kunye noyilo oluhle kunye ne-intshi ye-1-intshi
Kuyinyani ukuba intengiso yeekhamera ezihambelanayo ibethwe kakhulu zii-smartphones. Yi…
ICanon iyeka ukuthengisa ikhamera yayo ye-analog yamva nje
Ukufota kwe-Analog kuthatha ukubetha okukhulu kwiCanon. Kungenxa yokuba inkampani ibhengeze ukuba bayayeka ukuthengisa ...
por UNacho Cuesta yenzayo 4 iminyaka .
Intengiso yeekhamera ezingama-360 zedigri ngokuthe ngcembe ifumana ukuthandwa phakathi kwabasebenzisi, nangona kunjalo, kwi ...
Le yiPanasonic LUMIX FT7 entsha, ikhamera yabakhenkethi
Inkampani yaseJapan iPanasonic, yangena kwihlabathi lokufota, kwiminyaka embalwa edlulileyo ngempumelelo enkulu ...
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo sikuxelele malunga neekhamera zeOlimpus ezintsha. Olu luhlu lweOlimpus ...
I-GoPro, uphawu lwekhamera ezaziwayo zaseNyakatho Melika ziveze eyona modeli isisiseko kwikhathalogu yayo ethile. Ndiyazi…
Thumela umxholo wakho we-iPhone kwiTV ngaphandle kweApple TV
ISO, ASA kunye ne-DIN